Ciyaaraha | Mustaqbal Radio | Page 5
Home - Barnaamijyo - Ciyaaraha (page 5)
Real oo guuldaro qaraar kala kulantay Sevilla.
Kooxda Kubadda Cagta Real Madrid ee dalka Spain ayaa xalay guul darro kala kulantay dhiggeeda Sevilla kaddib ciyaar xiiso badneyd oo dhexmartay labada kooxood. Kabtan Sergio Ramos,ayaa gool iska dhaliyay,mid dhaliyay,gool ku laadna cunay,waxaana xalay uu Garoonka ku lahaa saameyn gaar ah maaddaama shabaqa labada kooxood uu taabtay. Ciyaarta waxaa ay ku soo dhamaatay 3-2 oo ay guusha ku raacday ...
Zaha oo loo doortay ciyaaryahanka bisha Bisha Premier League-ga.
Crystal Palace weeraryahankeeda Wilfried Zaha ayaa loo magacaabay ciyaaryahanka bisha ee Premier League. Zaha ayaa xilli ciyaareed fiican ku qaatay Crystal Palace, lakiin waxa uu si gaar ah muhiim ugu ahaa soo nooleynta kooxda London tan iyo markii uu yimid Roy Hodgson. Tababaraha cusub ayaa kulamo fiican ciyaaray horyaalka ingriska waxaana uu kooxda ku hogaamiyay guulo muhiim ah. Weeraryahanka ayaa ...
Rooney oo ku wajahan horyaalka MLS-ka.
Weeraryahanka Kooxda Everton Wayne Rooney ayaa wadahadal la furay koox ka dhisan Horyaalka Dalka Mareykanka ee loo yaqaanoo MLS. Rooney waxaa uu doonayaa in uu u wareego Horyaalka kubadda Cagta Mareykanka,waxaana uu hadda wadahadal kula jiraa Kooxda lagu magacaabo DC United ee ka dhisan mareykanka. Rooney ayaa dhamaadka xagaagan ka dhaqaaqaya Garoonka Goodison Park ee ay ku ciyaarto kooxda Everton,halkaas ...
Daafaca Liverpool ka tirsan Oo Seegi Doona Finalka Champions League-ga.
Kooxda Liverpool ayaa wayday adeega daafaca Joe Gomez finalka champions League ay la ciyaari doonto kooxda Real Madrid. Daafaca reer England ayaa seegay 3-dii kuln ee ugu dambeeyay kadib markii uu maray qaliin kuraanta ah. Gomzez oo 20 jir ah oo si joogto ah uga soo muuqday kaydka kooxda Liverpool xilli ciyaareedkan ayaa seegi doona kulanka Finalka ee ka dhici ...
Wakiilka Luka Modric Oo Sheegay In Uu Xiddiga Ka Tagi Doono Real Madrid.
Wakiilka xiddiga khadka dhexe ee kooxda Real madrid ee Luka Modric ayaa shaaca ka qaaday in uu xiddiga reer Croatia ka tagi doono kooxda Real Madrid waliba sheegay kooxda uu ku biiri doono. Wakiilka xiddiga Real Madrid Luka Modric ayaa shaaca ka qaaday in ciyaaryahanka reer Croatia ee Luka Modric uu u dhaqaaqi karo kooxda Serie A ee Juventus. 32 ...
Samuel Eto’o Oo ammaan kala dul dhacay xidig PSG u ciyaara.
Laacibkii hore ee kooxaha Barcelona Inter Milan iyo Chelsea Samuel Eto’o ayaa amaan ugu qubeeyay xiddig u ciyaara kooxda PSG isaga oo aaminsan in uu maalin noqon karo ama uu mari karo wadada xiddiga Barcelona ee Lionel Messi. Halyeeyga reer Cameroon ee Samuel Eto’o ayaa aaminsan in xiddiga uga ciyaara Weerarka kooxda PSG ee Kylian Mbappé uu noqon karo Lionel ...
Santi Cazorla Oo Doonaya Inuu dib ugu laabto horyaalka Spain.
Xidiga Arsenal Santi Cazorla ayaa lagu soo waramayaa inuu diirada u saaran yahay xagaaga inuu u dhaqaaqo kooxdiisii hore ee Villarreal. Ciyaaryahanka reer Spain ayaa u dhaqaaqi doona horyaalka Spain sida laga soo xigtay AS. Cazorla ayaa garoomada ka maqnaa muddo 18 bilood ah kabid dhawac soo gaaray xidiga reer Spain. Xiddiga reer Spain, oo u soo ciyaaray Villarreal intii ...
Real Madrid oo ku dhaw qaadashada Neymar.
Wakiillo ka socda Kooxda Kubadda Cagta Real Madrid ee dalka Spain ayaa waxaa ay Dalka Brazil kula kulmeen weeraryahanka Kooxda PSG ee Neymar lagu magacaabo. Kulanka Wakiillada Real Madrid iyo Neymar ayaa dhacay labo jeer,waxaana la sheegayaa in la isku afgartay lacagta uu Neymar ku aadayo Real Madrid. War ay qortay Jariiradda AS ayaa waxaa lagu sheegay in Real Madrid ...
HORDHACA: Sevilla vs Real Madrid+Safafka Suurtagalka ah.
Kulan ka tirsan Laligaha dalka Spain waxaa isaga hor imanaya Kooxaha Sevilla iyo Real Madrid,labada kooxood midna tartan uguma jirto Koobka oo waxaa horay u qaadday Barcelona hase ahaatee koox kasta waxaa ay dooneysaa kaalinta ay hadda ku jirto meel ka sarreysa. Ciyaartan waxaa ay ka dhici doontaa Garoonka Kubadda Cagta Kooxda Sevilla ee lagu magacaabo Ramon Sanchez Pizjuan Stadium. Sevilla, ...
HORDHAC: Juventus vs AC Milan+Safafka Macquulka ah.
Kooxaha Kubadda Cagta ee AC Milan iyo Juventus ayaa caawa isaga hor imanaya finalka koobka xiisaha badan ee Coppa Italia,waxaana ay labada kooxood midkasta dooneysaa hanashada koobkan. Dhinaca AC MIlan waxaa ay u noqoneysaa haddii ay qaadaan koobkii ugu horreeyay ee ay muddooyinkan sare u qaadaan,waxaa kale oo ay sumcad u noqoneysaa tababare Gattuso oo koobkan qaadaya markii ugu horreysay ...
Arsenal oo war kasoo saartay dhaawaca Laurent Koscielny miyuu seegayaa koobka Aduunka?
Tababaraha Arsenal Arsene Wenger ayaa shaaca ka qaaday in Laurent Koscielny uu garoomada ka maqnaan doono muddo lix bilood ah ka dib markii uu dhaawac ka soo gaaray intii lagu jiray kulankii Atletico. Koscielny ayaa laga saaray ciyaarta kadib 12 daqiiqo oo kaliya kulankii Wanda Metropolitano, iyadoo Wenger uu xaqiijiyay ka dib ciyaarta in 32 jirkaan ay u badan tahay ...
Manchester United oo aqbashay in laacibkan ay ka iibiso Barcelona?
Kooxda Barcelona ayaa lagu soo waramayaa inay 22 milyan ginni u soo ku dooneyso ciyaaryahanka khadka dhexe ee Manchester United Ander Herrera. Herrera ayaa xili ciyareedkan saftay 24 kulan oo Premier League ah isagoona inta badan ka mid ah ciyaartoyda kursiga keydka. 28 jirkaan ayaa la fahamsan yahay inuu isha ku hayo inuu dib ugu laabto Spain isagoona markaan dalab ...